Gịnị Mere Ndịàmà Jehova Anaghị Eme Ememme Ncheta Ụbọchị Ọmụmụ? | Ajụjụ Ndị Mmadụ Na-ajụkarị
GỤỌ NKE Abkhaz Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Azerbaijani Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bicol Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Colombian Sign Language Corsican Croatian Czech Dangme Danish Dutch English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Igbo Iloko Indonesian Irish Sign Language Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kabyle Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Lomwe Low German Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ndịàmà Jehova anaghị eme ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ n’ihi na ha ma na Chineke kpọrọ ya asị. Ọ bụ eziokwu na Baịbụl ekwughị hoo haa na icheta ụbọchị ọmụmụ dị njọ, ma o kwuru ihe ndị ga-enyere anyị aka ịma ma Chineke ọ̀ nabatara ihe ndị a na-eme na ya. Ka anyị leba anya na anọ n’ime ihe ndị ahụ na ihe Baịbụl kwuru gbasara ha.
Ọ bụ ndị ọgọ mmụọ bidoro ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ. Otu akwụkwọ a na-akpọ Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend, nke Funk & Wagnalls bipụtara kwuru na ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ malitere n’ihi nkwenkwe bụ́ na o ruo n’oge a mụrụ mmadụ n’afọ, “ndị mmụọ ọjọọ na-abịa ka ha merụọ onye ahụ ahụ́,” ma na “ọ bụrụ na ndị enyi onye ahụ anọrọ ya nso, na-agọkwara ya ọfọ ọma, ọ ga-eme ka ndị mmụọ ọjọọ ahụ ghara ime ya ihe ọ bụla.” Akwụkwọ bụ́ The Lore of Birthdays kwuru na n’oge ochie, ihe e dere banyere ụbọchị a mụrụ mmadụ “dị mkpa maka iji ya achọpụta otú ọdịnihu onye ahụ ga-adị.” Ọ bụ “anwansị ndị na-agụ kpakpando” ka ha ji eme ya. Akwụkwọ ahụ kwukwara na “ndị oge ochie kwetara na kandụl a na-amụnye n’ụbọchị ncheta ọmụmụ mmadụ nwere ikike pụrụ iche ga-eme ka ọfọ ọma a gọọrọ mmadụ ree.”
Ma, Baịbụl kagburu ime anwansi, ịgba afa, na ime mgbaasị, ma ọ bụ “ihe ndị dị otú ahụ.” (Diuterọnọmi 18:14; Ndị Galeshia 5:​19-​21) O doro anya na otu ihe mere Chineke ji maa ndị bi na Babịlọn oge ochie ikpe bụ n’ihi na ha na-eji kpakpando akọ ọdịnihu, nke bụ́ ịgba afa. (Aịzaya 47:11-​15) Ọrụ Ndịàmà Jehova abụghị ịchọpụta otú omenala na ememme ọ bụla si malite. Ma ọ bụrụ na Akwụkwọ Nsọ ekwuo ihe gosiri na otu omenala ma ọ bụ ememme adịghị mma, anyị anaghị eleghara ihe ahụ o kwuru anya.
Ndị Kraịst oge mbụ emeghị ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ. Akwụkwọ bụ́ The World Book Encyclopedia kwuru na Ndị Kraịst oge mbụ “lere ime ememe ụbọchị ọmụmụ mmadụ anya dị ka omenala ndị ọgọ mmụọ.” Ihe Baịbụl kwuru gosiri na Ndị Kraịst niile kwesịrị ịna-eṅomi ndịozi Jizọs na ndị ọzọ Jizọs kụziiri ihe.​—2 Ndị Tesalonaịka 3:6.
Ihe a gwara Ndị Kraịst ka ha na-echeta bụ ọnwụ Jizọs, ọ bụghị ọmụmụ ya. (Luk 22:17-​20) Ihe a ekwesighị ịjụ anyị anya n’ihi na Baịbụl kwuru na ‘ụbọchị ọnwụ mmadụ dị mma karịa ụbọchị a mụrụ ya.’ (Ekliziastis 7:1) Mgbe Jizọs jechara ozi ya n’ụwa, o doro anya na o meere onwe ya ezi aha n’ebe Chineke nọ. Ọ bụ ya mere ụbọchị ọnwụ ya ji dị mkpa karịa ụbọchị a mụrụ ya.​—Ndị Hibru 1:4.
O nweghị onye na-efe Chineke Baịbụl kwuru na o mere ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ. Ọ bụghị na ndị dere Baịbụl chefuru ide ya n’ihi na ha dere gbasara mmadụ abụọ na-anaghị efe Chineke mere ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ ha. Ma, Baịbụl akọghị akụkọ ọma banyere ememme ahụ ha mere.​—Jenesis 40:20-​22; Mak 6:​21-​29.
Ọ̀ na-ewute ụmụ Ndịàmà Jehova na a naghị emere ha ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ?
Ndịàmà Jehova na-emere ụmụ ha ihe ezigbo nne na nna ọ bụla na-emere ụmụ ya. Ha na-elekọta ụmụ ha nke ọma, na-enyekwa ha onyinye mgbe ọ bụla n’afọ. Ha na ụmụ ha na-anọrịkwa nwee obi ụtọ. Ha na-eṅomi Chineke, onye na-emere ụmụ ya ihe ọma. (Matiu 7:​11) Lee ihe ụfoḍụ ụmụ Ndịàmà Jehova kwuru gosiri na ọ naghị ewute ha na a naghị emere ha ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ:
“Ọ na-akacha atọ m ụtọ ma mmadụ nye m ihe mgbe m na-atụghị anya ya.”​—Tammy. Ọ dị afọ 12.
“Ọ bụ eziokwu na mama m na papa m anaghị azụtara m ihe n’ụbọchị ọmụmụ m, ma ha na-azụtara m ihe n’oge ndị ọzọ. Ọ na-aka atọ m ụtọ n’ihi na anaghị m atụ anya ya.”​—Gregory. Ọ dị afọ 11.
“Ì chere na ọ bụ nkeji iri, keeki ole na ole na egwú na-eme ka oriri tọọ ụtọ? Bịa n’ụlọ anyị ka ị hụ otú oriri na-adị.”​—Eric. Ọ dị afọ 6.